सरकार ! चुनाव होइन कोरोनाको खोप र गुमेको रोजगारी देऊ
रमेश तुफान पण्डित बुधबार, पुस ८, २०७७ मा प्रकाशित
यतिबेला आम नेपालीहरु कोरोना महामारीको चपेटामा परेर टाउको उठाउन सकेका छैनन् । कोही भने जेनतेन खोप आउला भन्नेमा प्रतिक्षारत छन् त कोही हजारौंको संख्यामा गुमेको रोजगारी/स्वरोजगारी पुर्नस्थापना हुन्छ कि भन्नेमा आशावादी छन् ।
लाखौं युवाहरु स्वदेशमा बाँच्न नसक्ने वा परिवार पाल्न नसक्ने ठहर गदैं सरकारको लगडाउन तोडेर दैनिक हजारौंको संख्यामा भारतर्फ लागिरहेछन । भारतमा यहाँ भन्दा लाखौंको सख्यामा कोरोना फैलिरहेको भएपनि उनीहरु रोजगारीको शुनिश्चित हुने आशाले त्यसतर्फगएका हुन । विदेशमा रहेका युवाहरुको हकमा पनि पहिला त सरकारले फर्किने ब्यबस्था गर्न सकेन पछिल्लो समयमा अधिकांशले नेपालमा भन्दा विदेशमै खोप छिटो पाउने र रोजगारीको पुनस्थापन हुन थालेपछि विदेशमै रहने निर्णय गरेको देखिन्छ ।
स्वदेशमा रहेका वा विदेशमा जहाँ भए पनि छिटो भन्दा छिटो खोप लगाउन र गुमेको रोजगारी पुर्नस्थापना आम नेपालीको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । अर्थात आफु र आफनो परिवार बाँच्ने र बचाउने मुद्दा नै पहिलो बनाएका छन भन्दा फरक नपर्ला ।
भनिरहनु परेन, कोरोना परिक्षणसम्म सर्वसुलभ र सहज नभएका कारण लाखौं नेपालीहरुको अकालमै ज्यान गईरहेको छ । निश्चित छ, यही गतिमा सरकारले एक बर्षम १० भागको एक भाग नेपालीलाई पनि परीक्षणको दायरामा ल्याउन सक्ने छैन । परीक्षणको दायित्व सरकारले नलिएपछि महँगो शुल्क तिरेर आम नागरिकहरु सिमितको संख्यामा परिक्षणमा जान थालेका छन् । कोरोना उपचार र रोकथाम सरकारले ब्यबस्थापन र नियन्त्रण गर्न सकेन वा सकेको छैन ।
सरकारको आंकडा अनुसार कोरोना संक्रमण २५ लाख ४५ हजार र यसबाट मृत्यु हुनेको संख्या १८ सय पुगेको छ । कोरोनाका कारण आत्महत्या गर्नको संख्या भने ७ हजार नाघेकको छ । यद्यपी यो अ‍ैपचारिक आँकडा मात्र हो यथार्थतमा यसको यो भन्दा संख्या बढी छ ।
कोरोनाबाट मुिक्त नै पहिलो प्राथमिकता राखेका आम नागरिकहरुले सरकारको असफलता र असक्षमता वा ठुला ठुला भ्रष्टचारमा पनि आँखा चिम्लिए । स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानीमा भएका ढिलासुस्ती वा कमसल सामाग्री ढुवानीमा पनि नागरिकहरुले धैर्य राखे । जतिबेला विश्वमा बढेको कोरोना महामारी हेर्दा १ मिनेट समय बर्बाद गर्नु सकिंदैनथ्यो । यसबीचमा मन्त्रीकै आफन्तहरुको नाममा रहेको ओम्नी समुहलाई बिना मापदण्ड स्वास्थ्य सामाग्री ढुवानी तथा खरिदको ठेक्का दिईयो । यो शक्तिको आडमा गरिएको अनियमितता तथा निकृष्ट भ्रष्टचारमा पनि जनता चुपै बसे । ट्रष्ट र सरकारी नाममा रहेको हजारौं बिघा जग्गा यती समूहलाई हस्तान्तरण गर्दा होस या सेक्युरिटी मेसिन खरिदमा ७० करोडको बार्गेनिङमा वा बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा अतिक्रमण गर्ने नेताहरुको संरक्षणमा होस त्यसमा पनि नागरिकहरुले सडक अबरोधमा निस्केनन् । यतिसम्म की खुलामञ्चमा निमुखालाई खाना बितरण समेतमा रोक लगाईयो । आम नेपालीले बिद्युत प्राधिकरणका कुसल ब्यबस्थापक कुलमानलाई अवकाश नदिइयोस भन्ने चाहना राखे । किसानले यो बर्ष मल पाएनन, किसानको पहुँचको बजार भएन, उपजले न्युनतम मुल्य पाएन । स्वास्थ्य सेवा र शिक्षालाई सर्बसाधारणको पहुँचमा पुर्याउने डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहमा उनको जीवनप्रति सरकारले उदासिनता देखाउँदै थियो । कोभिड संक्रमणलाई ख्याल राखी डा। केसीको आन्दोलनमा नागरिकहरुले सांकेतिक बिरोध मात्र गरे ।
लिम्पियाधुराको नक्सा नेपालको नक्शामा सामेल गराएको दुई बर्ष नपुग्दै चुच्चे नक्शा हटाईयो । चुच्चे नक्सा छापिएको शैक्षिक पुस्तक वितरणमा रोक लगाईयो । थोरै भए पनि नेपालको भुमी नेपालको नक्शामा सामेल गरिएकोमा गौरव महसुस गरेका नागरिकहरुले भुमी फिर्ता ल्याउने भन्दा उल्टै नक्शाबाट हटाउँदा पनि कोरोनाकै एक प्रमुख कारण हुन सक्छ बिरोध र बिद्रोह मनभित्रै दवाए ।
कोरोना रोकथाम तथा ब्यबस्थापनमा सरकारद्वारा भएका प्रशासनिक झमेला, सास्ती, ढुवानी, हिंडडुल अवरोधलाई समेत सहन बाध्य भए । सरकार यी तमाम जनचासोका मुद्दाहरुमा बाधक बन्यो, कारक बन्यो मुकदर्शक बन्यो । बरु आफनै दल भित्रको अन्तरकलह र स्वार्थसिद्धमा तल्लिन रहयो । जसले गर्दा जनतालाई सही सेवा वा बिपदमा राहत दिन असफल भयो ।
यसबीचमा सरकारले गत पुष ५ गते आईतबार बिहान प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा चुनाव गर्न सिफारसि गरी राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत समेत गराएको छ । नागरिकको दैनिक जीवन रोकिएको वा मुस्किलले चलिरहेको यो संकटाबाट मुक्त हुन नपाउँदै थप अर्को राजनीतिक संकट सरकार आफैंले निम्त्याएको छ । सरकारको यस कदमले देशमा थप अस्थिरता र आर्थिक संकट थप्ने निश्चित छ । संघियता सहितको तीन तहको आवधिक चुनाव नै विदेशी ऋणबाट गरिरहेको देशमा दुईतिहाई बहुमतको आफनै दलको सरकार आफैंले ढालेर जनताकोमा जान लागेको भनेर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । आफनो दलको आन्तरिक लडाँईको कारण देखाउँदै आम नागरिकहरुलाई संकटमाथि संकट थोपर्ने सरकारको यो कदम जनबिरोधि पनि छ ।
भलै सरकारको यो कदम गैर संबैधानिक रहेको संविधानविद तथा कानुनविदहरुले बताईरहेका छन । नागरिकहरुलाई नेकपाको आन्तरिक लडाँई भन्दा आफु वा आफनो परिवारको स्वास्थ्य अनि भविष्य प्रति चिन्ता र चासो छ । सरकारले कोरोना खोप, उपचार र जनजीवन सहज पार्न नसक्ने तर मध्यावधि चुनावका लागि अर्वौं खर्च कसरी गर्न सक्छ ?
यसर्थ जनताको आवश्यकता र प्राथमिकताभन्दा धेरै परको मुद्दामा सरकारले जबरजस्ती घचेटेको देखिन्छ । चुनावी घोषणामा नागरिहरुलाई लोभलाग्दो नाराहरुः घरघरमा ग्यास लाईन, रेल, तेल र पानी जहाजको नारा पस्किने, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने बिकासको लक्ष बताएर नथाक्ने यो सरकारले जनताका यावत समस्या थाति राखेर फेरि कुन नारा लिएर भोट माग्न जाने हो, त्यो त हेर्न बाँकी नै छ ।
(कृषि उद्यमी तुफान सामाजिक अभियन्ता पनि हुन्)
रमेश तुफान पण्डितबाट थप